Vaovao - Maninona no maty ny mombamomba ny aliminioma - misokatra bebe kokoa hatrany ny fanao?
Ny profil aluminium alimina dia karazana extrusion alloy aluminium novokarin'ny vokatra indostrialy nampiasaina profil. Ny fampanjariana maty ny profil aluminium dia midika fa ankoatr'ireo 20,30,40,50,60,80,90,100,120 sy ireo andiany mahazatra an'ny aliminioma, ny mombamomba ny alimo aliminioma dia mety misy endrika hafa ihany koa, ka hafahafa hafahafa ny mombamomba azy. Tsy ny fanaingoana no tsy mitovy, fa ny fanaingoana no tsy mitovy.
Maty ny mombamomba ny aliminioma: ny fomban-doha manokatra dia ny fizotran'ny famokarana sy ny fizotrany. Izany hoe: ny famokarana bobongolo voaloham-bokatra voalohany, ary avy eo manomàna bara firaka alimina, ary avy eo amin'ny famokarana extrusion masinina. Ny bobongolo dia namboarina matetika araka ny fizarana tsara ho an'ny mpampiasa, ny fizarana aluminium hafa, ny fahombiazan'ny metatra sy ny lanjan'ny metatra ary ny lafiny hafa dia tsy mitovy. Ny mombamomba ny alimina alimina maty ary ny mombamomba ny aluminium tsotra dia tsy misy mahasamihafa azy, na fitsaboana ara-materialy na ety ambony, ankoatry ny fanaingoana azy, ny hafa kosa mitovy.
Tao anatin'izay taona lasa izay, ny haben'ny tsena ny fisokafan'ny bobongolo profil sy ny fanaingoana dia nitombo. Ny antony lehibe indrindra dia ny fisondrotan'ny indostria automatique nitazona ny fampiharana ireo vokatra firavaka aliminioma samihafa. Mihamaro hatrany ny vokatra firaka vita amin'ny aliminioma, noho izany ny mombamomba ny alim-baravarankely maty manokatra fomba amam-panao malaza kokoa, dia mila bebe kokoa. Misy fizarana vaovao maro, toy ny zigzags, zigzags ary endrika tsy ara-dalàna, ary koa ny famaranana loko namboarina.
Ny fanaingoana dia teny mahazatra amin'ny fiainana, an'ny sokajy haitraitra maivana izay lazain'ny olona matetika. Ny fomban'ny alim-bolan'ny alimina alimina dia sehatry ny indostrian'ny firaka aliminioma, ity firafitry ny vokatra firavaka aliminioma ity, ny famokarana bobongolo profil aluminium dia lehibe kokoa, be mpampiasa kokoa, ny filàna fanavaozana tsy tapaka sy ny fampandrosoana hihaonana amin'ny tsena miovaova.